N'ogbe Omenala Nrụgide oru Retractable Dog Leash factory na ndị na-ebu ya | Kudi
Omenala Obu Oru Okpuru Ohia
Zipu Ajuju Nkata Ugbu a
Black na White ma ọ bụ Omenala
ABS + TPR + SS + naịlọn
Ngwugwu / Logo:
Usoro nke Mbupu:
Advantage nke Omenala Oru Ozo Ochie Dog Leash
Usoro mkpọchi a tụkwasịrị obi na-eme ka eriri ahụ nwee ike ịgbatị ma weghachite nke ọma. Pịa breeki breeki ka breeki ya, slide mkpọchi bọtịnụ n'ihu ịkpọchi leash. Ọ bụrụ n'ịchọrọ iweghachite ọnọdụ nnwere onwe ahụ, sụgharịa bọtịnụ ahụ azụ. Naanị ịpịgharị na tụgharịa na mkpịsị aka gị naanị, dị mfe ma dịkwa nchebe.
Onyinyo nke Omenala Oru Okpu Retractable Dog Leash
1.Are ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa?
Anyị bụ ndị a factory pụrụ iche na n'ichepụta Pita ngwaahịa maka afọ 20.
2.Olee esi mee mbupu ahụ?
RE: Site n’oké osimiri ma ọ bụ site na ikuku maka nnukwu iwu, kwupụta nnyefe dị ka DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT maka obere iwu.
Ọ bụrụ na ị nwere ndị ọrụ ụgbọ mmiri na China, anyị nwere ike izipu ngwaahịa gị na onye ọrụ China gị.
3.What bụ oge ndu gị?
RE: Ọ bụ ihe dị ka ụbọchị 40 ka ọ dị. Ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa na ebuka, ọ ga-abụ ihe dịka ụbọchị iri.
4. Enwere m ike ịnweta nnwere onwe n'efu maka ngwaahịa gị?
RE: ee, ọ dị mma ịnweta nnwere onwe efu ma biko nwee ike ịkwụ ụgwọ ọnụahịa ahụ.
5: Gini bu uzo ugwo gi?
RE: T / T, L / C, Paypal, Kaadị akwụmụgwọ na na.
6. Kedu ụdị ngwugwu ngwaahịa gị?
RE: Ọ dị mma ịhazi ngwugwu ahụ.
7.Can m ileta ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị tupu ị nye iwu?
RE: Sure, anabatanụ ileta ụlọ ọrụ anyị, biko hazie oge ị ga-aga n'ihu.
Achọ gị ase nke a igwe anaghị agba nchara Dog mbo
Nke gara aga: Extra Bungee Ntughari Dog Leash
Olu akwa nkịta na-atụgharị uche